Safaaradda Shiinaha ee Muqdisho oo ka warbixisay xaladda caafimaad ee Soomaalida ku nool dalkaas – Hornafrik Media Network
Safaaradda Shiinaha ee Muqdisho oo ka warbixisay xaladda caafimaad ee Soomaalida ku nool dalkaas
Safiirka dowladda Shiinaha u jooga Soomaaliya Qin Jian ayaa maanta ka warbixiyey xaaladda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkaas uu ka dilaacay xanuunka Corono-virus.
Shir jaraa’id oo safiirku uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu ku yiri, “Marka la eego xaaladda muwaadiniinta Soomaalida ee jooga Wuhan iyo Hube waa laga warqabaa, waxaana ay ka mid yihiin ajaanibta ay dawladda Shiinuhu la socoto badqabkooda”.
Safiirka oo sii hadlayey ayaa yiri, “Dawladda Shiinaha waxay damaanad qaadaysa badqabka caafimaad ajaanibta Shiinaha ku nool, waana daaweynaynaa inta ay Shiinaha joogaan”.
Sidoo kale safiirka ayaa sheegay in arday badan oo Soomaaliyeed ay wax ka bartaan Jamacadaha ku yaalla Wuhaan, kuwaas oo sida uu sheegay dowladdu si dhaw ula socoto bad-qabkooda.
“Soomaalidana haddii aan eegno sanadihii dambe arday badan ayaa Shiinaha tagay si ay wax uga bartaan kuwaas oo si gaar ah wax uga barta jaamacadaha Wuhaan. Inta aan oghanay illaa iyo 35 arday ayaa dhigata jaamacadda Wuhan, laba ruux oo Soomaali ah ayaan xaqiiijinay caafimaadkooda oo aan baarnay ayadoo shaqadaas ay qabteen mas’uuliyiinta magaalada” ayuu yiri Qin Jian.
Isagoo sii hadlayey ayuu yiri, “Qeybta caafimaadka ee ciidamada ayaa baro gaar ah oo xaaladooda lagula socdo ka sameystay meelaha ardaydu degenyihiin, si xaladooda loola socdo. Waxaan dhamaan ajaanibta la wadagaynaa in ay xaaladahooda safaaradaha ay Shiinaha ku leeyihiin la socodsiiyaan.
Ugu dambeyntii safiirka dowladda Shiinaha u fadhiya Muqdisho ayaa carabka ku adkeeyay in ka war qabidda dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaas ay dadaal badan geliyeen, “Dadaal badan ayaa galinaynay badqabka ajaanibta oo Soomaalida ku jirto”ayuu yiri Qin Jian.
Macalinkii Xulka Qaranka Soomaaliya oo shaqada uga tegay sababo amni darro
Cumar Al-Bashiir oo loo gacan gelinayo maxkamadda dembiyada dagaalka ee ICC